Nwunye Quail | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Nwunye Quail
Ngwongwo Quail: nso idi ebube na nsogbu?
Ọ bụ ezie na nsị quail adịghị mma na ịkwado ọkụ ọkụ, ogologo oge ha meriri òkè ahịa ha. N'ebe nchekwa ụlọ ahịa, na magazin ndị na-ewu ewu na n'Internet, anyị nwere ike ịchọta otutu ozi nke na-akwado abamuru ha, mkpa ọ dị itinye ha na nri kwa ụbọchị iji nọgide na-arụ ọrụ ọma.
Среди всего разнообразия птичьих яиц наиболее распространенными в нашем рационе являются куриные и перепелиные. В этой статье мы попробуем разобраться, можно ли употреблять их в сыром виде, в чем состоит разница между теми и другими, и насколько она существенна. Ngwakọta na ihe oriri na-edozi uru nke raw nko Dị ka njirimara dị mkpa si dị, nsen nnụnụ nwere ihe ndị na-esonụ maka 100 g: ọkụkọ: proteins - 12.7 g (ọnụego kwa ụbọchị - 27.6%); abụba - 11.5 g (nkwụnye ego kwa ụbọchị - 20,%); carbohydrates - 0,7 g (nkwekọrịta kwa ụbọchị - 0.3%); acids fatty acids - 3,4 g (ọnụego kwa ụbọchị - 18.9%); polyunsaturated fatty acids - 1.9 g (ọnụego kwa ụbọchị - 31.8%); acho fatty acids - 3.6 g (ubochi ubochi - 10.1%); quail: protein - 11.9 g (ọnụego kwa ụbọchị - 25.9%); abụba - 13.1 g (ọnụego kwa ụbọchị - 23.4%); carbohydrates - 0,6 g (nkwụnye ego kwa ụbọchị - 0,2%); acids fatty acids - 3.5 g (ọnụego kwa ụbọchị - 19.1%); polyunsaturated fatty acids - 1.3 g (onyinye kwa ụbọchị - 22%); mmiri ara ehi fatty acid - 4.3 g (ọnụego kwa ụbọchị - 12%).
Nlekere ole ka otu quail na-ebu kwa ụbọchị na ihe mmepụta ihe na-adabere
Ezigbo anụ ụlọ ọ bụla kwesịrị ịmepụta ọnọdụ kachasị mma maka ọrụ ndụ zuru oke, karịsịa maka ndị chọrọ "ego" n'ụdị maka ndụ ha. Ụkpụrụ dị otú ahụ ga-esoro ndị nwere ugbo quail.
Otu esi ewe quail eggshell: uru na nsogbu
Ọtụtụ ndị nwere ike ịnụ banyere abamuru nke nsen quail. Ngwa nri a jupụtara na vitamin, amino acids na ihe ndị ọzọ bara uru. Ma, taa, anyị agaghị ekwu banyere nsen, kama banyere shea. Ngwakọta nke sheba quail na-ejikọta ihe ndị na-esonụ mineral: macronutrients - calcium, iron, magnesium, phosphorus; ihe nchọta - manganese, ọla kọpa, molybdenum, sọlfọ, fluorine, zinc, selenium, silicon; amino acids - methionine, lysine, cystine, isoleucine.
Esi esi ngwa ngwa kwusi ezin ulua
A na-ejikarị nnu Quail eme ihe na nri na ntanetị (maka ịme ihe mkpuchi), nakwa maka nri ụmụaka, karịsịa maka ụmụ ọhụrụ na-ata ahụhụ site na diathesis. N'otu oge ahụ, ndị mmadụ na - eche nsogbu ihu mgbe niile - otu esi agbaji ha ka obere iberibe shea wee banye n'ime nri ahụ. Tụlee ụzọ ndị dịnụ maka nke a.
Ghọta ibu ibu nke quail
Ngwongwo Quail dị oké ọnụ ahịa karịa ọkụkọ, ọtụtụ n'ime ndị agbata obi anyị na-eji obi ha anabata ọrụ siri ike dị ka ozuzu quail. Usoro a nwere ọtụtụ nuances, mana isi ihe nke mmasị ọ bụla na-azụlite bụ ma nọgide na-abụ ajụjụ nke arụpụtaghị. Nleba ole ka nsen, gini bu uka ha na ihe i kwesiri imata banyere ihe ndi ahu - guru ya.
Kedu ihe dị iche n'agbata nsen na ọkụkọ
A na-atụle nsị chickị na ọ bụ nri bara uru na nri dị mma nye ụmụ mmadụ. Enwere ike ịchọta ha na friji na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwunye ọ bụla. Ma, n'oge na-adịbeghị anya, nsị nke quail na-aghọwanye ndị na-ewu ewu, ebe ọ bụ na a na-ewere ha dị ka ihe bara uru ma na-eri nri karịa nsen anụ ọkụkọ. Ọ bụ eziokwu - ka anyị ghọtara ọnụ.
Mgbe quails amalite ofufe
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọnụ ọgụgụ nke quails na ọdịdị emeela ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, ya mere, iji mee ka ọnụ ọgụgụ ha mụbaa, ọ bụghị nanị na ndị ọrụ ugbo pụrụ iche na-etinye aka na ha, ma ọtụtụ ndị nwe ụlọ na-etolite etolite na anụ ọhịa na anụ ọhịa. Ha na-etolite ma maka anụ na nzube nke ịmepụta àkwá, bụ nke a na-ewere dị oke uru.
Uru na mmerụ nke nsen quail maka ụmụaka
Enwereghi obi abụọ maka abamuru nke umu anu quail. Nke a bụ ihe e kere eke nke nwere nnukwu uru nke uru bara uru maka ahụ. E kwuru ya na papaịrọs nke Ijipt oge ochie na akwụkwọ ntuziaka nke ndị na-agwọ ọrịa ndị China. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'uche na ahụ nwa ahụ adịghị ike karịa nke onye toworo ogo na nke nwere mmetụta siri ike.